၂၅ နှစ်အတွေ့အကြုံနှင့် ISO Cert ဖြင့်စိတ်ကြိုက်အရည်အသွေးမြင့်ရေစိုခံသံလိုက်များ၊ တရုတ် ၂၅ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိအရည်အသွေးမြင့်ရေစိုခံသံလိုက်များနှင့် ISO Cert ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံများ - Ever Greater
အခန်း ၁၀၀၄၊ Nan Yang Da Sha၊ Nan Bu Shang Wu Qu၊ Yinzhou ခရိုင်၊ Ningbo, Zhejiang, China ။ 1004
Panel & Warning Sticker
အဝတ်နှင့်အိတ် Metal Label
စိတ်ကြိုက်အရည်အသွေးမြင့်ရေစိုခံသံလိုက် ၂၅ နှစ်အတွေ့အကြုံနှင့် ISO Cert
CAR & ရေခဲသေတ္တာ MAGNET
သင်၏ရေခဲသေတ္တာ၊ ကား၊ သို့မဟုတ်သံလိုက်သတ္တုတစ်ခုခုပေါ်တွင် Stick'em！
အခြေခံပစ္စည်း အရည်အသွေး နည်းပညာ APPLICATION သို့
ဗီနိုင်းဖြူ အပြင်ဘက်အော်တိုအဆင့် ပုံစံအတိုင်းပုံပန်းသဏ္ဌာန် ရေခဲသေတ္တာ
သတ္တုဗီနိုင်း （Optional） အနိမ့်ကိရိယာတန်ဆာပလာ အော်တိုရည်ရွယ်ချက်
တောက်ပသော VINYL ခရမ်းလွန်အထောက်အထား တိကျသောတိမ်နှင့်ပြီးတော့ သံလိုက်ရည်ရွယ်ချက်များ
ရောင်ပြန်ဗီနိုင်း ရေစိုခံ Deboss
အရွယ်: 14 * 10cm
Supply စွမ်းရည်: 43110000 အပိုင်းအစ / လ
အသွင်သဏ္ဌာန်: စိတ်ကြိုက် ပို့ဆောင်ချိန်: အမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက် 10-25 ရက်အတွင်း
နမူနာအချိန်: ရက်ပေါင်း ၂၀-၄၀ ခန့် အဓိကဆိပ်ကမ်း: Ningbo, Shanghai, Shenzhen, Cannan
ပုံစံ: စိတ်ကြိုက် ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်: OPP အိတ်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်
ပစ္စည်း: သတ္တု သက်တမ်း:
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂၅ နှစ်ကျော်
ISO / TS16949 အသိအမှတ်ပြုထုတ်လုပ်
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လည်းမှန်ကန်သည် - အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းမှုတင်ပြခြင်းသည်သင်၏ထုတ်ကုန်များသည်အရည်အသွေးနိမ့်သည်ဟုထင်မြင်စေနိုင်သည်။
မင်းကိုခံစားရတယ် Ever Greater ကိုမင်းတို့ပြောရင်မင်းဘယ်လိုထင်မလဲ® အချိန်တိုင်းဆက်သွယ်မှုပြproblemsနာမရှိဘဲကြီးကျယ်တဲ့ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်သင့်ကိုစျေးကြီးပေးနိုင်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ "ဟုတ်ကဲ့၊ ကျေးဇူးပါ" လို့ပြောမယ်လို့မင်းထင်တယ်
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုက်နာမှုဖွဲ့စည်းပုံမှာတစ် ဦး အမြန်ကြည့်; ကျနော်တို့ကတစ် ဦး ယုံကြည်စိတ်ချရသောစာရင်းစစ်ခေါ်လို။ သင်ကအခြားပံ့ပိုးသူနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်လျှင်ပင်ဤစာရင်းသည်သင့်အားယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဖက်တစ် ဦး ကိုရှာဖွေရန်ကူညီနိုင်သည်။
ISO / TS16949 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - ဟုတ်ပါတယ်။
PayPal ငွေပေးချေမှုကာကွယ်မှု - ဟုတ်တယ်!
တစ်သက်တာအာမခံချက်ရွေးချယ်စရာများ - ဟုတ်တယ်!
အတိုင်းအတာအရွယ်အစားမှာယူနိုင်စွမ်း - ဟုတ်သည်！
တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု - ဟုတ်သည်!
အင်္ဂလိပ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု - ဟုတ်သည်！
အရင်းအမြစ်ရှာဖွေခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ - ဟုတ်ကဲ့!
ထုတ်လုပ်မှုမပြုမီနမူနာ - ဟုတ်တယ်！
ဖောက်သည်လွှဲပြောင်းအကျိုးခံစားခွင့်များ - ဟုတ်ကဲ့!
အစဉ်အမြဲသာ။ ကွီးမွတျ® Printing Solutions သည်သင်၏ပုံနှိပ်ခြင်းပြဇာတ်များအားလုံးကိုဖြေရှင်းပေးပြီးအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အခြားကုန်ပစ္စည်းများအတွက်လည်းနာကျင်မှုကင်းသောဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
အသုံးပြုခြင်း၊ ပစ္စည်းနှင့်ဘဝသံသရာကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းနယ်ပယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည့်စုံသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပါဝင်သည့်အခမဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးခြင်းအတိုင်ပင်ခံများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်သည်။ ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သင်၏အချိန်၊ ငွေနှင့်စွမ်းအင်ကိုသက်သာစေသည့်သင်၏ဘတ်ဂျက်အတွက်အကောင်းဆုံးကုန်ကျစရိတ် - ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆက်မပြတ်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများနှင့်အတူစျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်အသစ်များအားစဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်လက်ကမ်းစာစောင်များမှလက်ရှိကမ်းလှမ်းမှုများအပြင်ပစ္စည်းများနှင့်နည်းပညာအသစ်များကိုအသုံးပြုရန်သင့်အကြံပြုချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်မရှိသေးပါကသင့်အတွက်ထိုအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရယူနိုင်သည်။
အချို့သောပံ့ပိုးသူများ၏အရင်းအမြစ်သည်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်စွမ်းကိုသိသိသာသာကန့်သတ်ထားသောကြိုတင်ပြုပြင်ထားသောပစ္စည်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအများဆုံးပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင့်တော်တဲ့ထုတ်ကုန်ကိုသင့်တော်တဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ မင်းရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားရတယ် ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် MOQ နိမ့်ကျသည့်တိုင်ထူးခြားသောအရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စာပို့ပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အစဉ်အမြဲသာ။ ကွီးမွတျ® ကြီးမားသောနှင့်အသေးစား ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါသည်
အတူတူ, ငါတို့သာ။ ကြီးမြတ်များမှာ!
ကျွန်ုပ်တို့၏ turnkey ပုံနှိပ်နှင့်ဆေးထိုး - မှိုဖြေရှင်းချက်အရည်အသွေး, ထိရောက်မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ် - အာရုံစိုက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂါထာသည်ဤသို့ဖြစ်သည် - ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ပါ။ အချို့သောပံ့ပိုးပေးသူများသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်းသော်လည်း၊
အစဉ်အမြဲသာ။ ကွီးမွတျ® ကိရိယာတန်ဆာပလာများမှဖြန့်ဝေခြင်းအထိအရာအားလုံးသည်သင်နှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်အကောင်းဆုံးသောရလဒ်ကိုရရှိစေရန်ပွင့်လင်းမြင်သာပြီးစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
ဒီတော့ Everkey မှာ Turnkey ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ® ပုံနှိပ်ဖြေရှင်းနည်းများ?
web ကို:evergreater.en, alibaba.com
Skype ကို:8613858373220 +
Add:အခန်း ၁၀၀၄-၂၊ နန်ယန်စင်တာ၊ yinzhou ခရိုင်၊ Ningbo မြို့၊
Add:အခန်း ၁၀၀၄-၂၊ နန်ယန်းစင်တာ၊ yinzhou ခရိုင်၊ Ningbo မြို့၊
မူပိုင်ခွင့်©အစဉ်အမြဲသာ Greater အားလုံးမူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။